Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 26
Miasa amin'ny olona ve ny fanahy ary inona no zavatra ara-panahy?
Tsy maintsy apetrakao ilay fanontaniana alohan'ny hamaliana azy isika. Vitsy ny olona mieritreritra ny tiana holazaina rehefa mampiasa teny toa fanahy sy fanahy. Raha ny famaritana dia angatahina amin'ireto olona ireto dia vitsy ny tsy hahatsapa ny tsy fahafantaran'izy ireo ny dikan'ireo teny ireo. Maro ny fisafotofotoana ao am-piangonana satria misy izany. Miteny ny fanahy tsara sy ny fanahy ratsy, ny olona hendry sy ny fanahy adala. Voalaza fa fanahin'Andriamanitra, fanahin'olona, ​​fanahin'ny devoly. Avy eo dia misy fanahy maro eo amin'ny natiora, toy ny fanahin'ny rivotra, ny rano, ny tany, ny afo, ary ny fanahy dia vokatry ny alikaola. Ny biby tsirairay dia noforonina miaraka amina fanahy iray ary ny soratra masina sasany dia miresaka momba ny fanahy hafa maka ny biby. Ilay kolontsaina fantatra amin'ny hoe Spiritualism, na Spiritism, dia miresaka ny fanahy mpiambina, ny fifehezana ny fanahy ary ny tanin'ny fanahy. Ny materialista dia mandà fa tsy misy fanahy. Ny kolotsaina fantatra amin'ny anarana hoe Christian Science, amin'ny fampiasana liberaly an'io teny io, manampy ny fisafotofotoana ary ampiasainy amin'ny halatra azo ovaina. Tsy misy ny fifanarahana momba ny fanahy sy ny toerany na ny hatsaran'ny teny ara-panahy. Rehefa ampiasaina ny teny ara-panahy amin'ny ankapobeny dia entina hanarenana ireo toetra, toetra ary toe-javatra izay heverina fa tsy ara-batana, fa tsy ara-nofo, fa tsy eto an-tany. Araka izany dia maheno ny haizina ara-panahy, ny fahazavana ara-panahy, ny fifaliana ara-panahy ary ny alahelo ara-panahy isika. Misy milaza fa nahita sary ara-panahy ny olona; misy mandre olona ara-panahy, fanehoam-panahy, fihetseham-po ara-panahy ary na fihetseham-po ara-panahy aza. Tsy misy fetra ny fady amin'ny fampiasana ny teny hoe fanahy sy ara-panahy. Mbola hitohy ny fisafotofotoana toy izany raha tsy manaiky ny hevitry ny dikany ny olona na ny heviny amin'ny fiteniny. Tokony hampiasa teny voafaritra isika mba hisehoana hevitra voafaritra, mba hahafantarana ny hevitra voafaritra. Amin'ny alàlan'ny famaritana voafaritra ihany no ahafahantsika manantena hifanakalo hevitra amin'ny tsirairay avy ary hahita fomba amin'ny alàlan'ny fifangaroana ara-tsaina. Ny Fanahy no lohalaharana ary koa ny faratampony, ny kalitao na ny toerany, amin'ny zava-drehetra naseho. Ity fanjakana voalohany sy farany ity dia nanalavitra ny fizahana ara-batana. Tsy azo aseho amin'ny fandalinana simika izany, saingy mety ho voaporofo ao an-tsaina. Tsy hitan'ny fizika, na ny simia ilay izy, satria ny valin-dry zareo sy ny fitsapana azy dia tsy mamaly, ary satria tsy eo amin'ny fiaramanidina iray ihany ireo. Saingy mety ho voaporofo eo an-tsaina izany satria eo amin'ilay fiaramanidina ny saina dia mety mandeha any amin'izany fanjakana izany. Ny saina dia mitovy amin'ny fanahy ary mety hahafantatra azy. Ny fanahy dia ilay manomboka manomboka mihetsika sy tsy mihetsika afa-tsy ny ray aman-dreny. Ny hery ara-panahin'ireo ray aman-dreny dia tsy mihetsika, tsy mihetsiketsika, tsy mandehandeha, mihetsiketsika ary homogenous, afa-tsy rehefa mivoaka ny tenany ny ampahany iray dia mandalo vanim-potoana fisehoana antsoina hoe tsy fahalalàna sy fivoarana, ary hamonjy rehefa ny ampaham-potoana izay niverenany dia miverina ao amin'ny ray aman-dreniny ihany. fananana. Eo anelanelan'ny làlana sy ny fiverenan'ny toetran'ny ray aman-dreny dia tsy voalaza etsy ambony.
Ny akora rehefa avoaka araka izany dia tsy fananana intsony, fa misy dikany ary toy ny ranomasina mirehitra, habakabaka na habakabaka mihetsiketsika mihetsiketsika amin'ny gadona, ny iray manontolo dia potika. Ny sombintsombiny tsirairay, toy ny iray manontolo, dia misy karazany roa sy tsy azo zahana. Fanahy io. Na dia mety mamakivaky ny fanjakana sy ny toe-javatra rehetra aza ny sombintsombiny tsirairay, dia tsy azo tapahina na hosarahana na zarazaraina ho azy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba hafa. Ity fanjakana voalohany ity dia antsoina hoe ara-panahy ary na dia misy toetra roa aza, nefa tsy azo sarahina, ny fanahy-fanahy dia azo antsoina hoe fanahy raha amin'ity toetra voalohany na ara-panahy ity satria ny fanahy dia manjaka tanteraka.
Manaraka ny drafitra ankapobeny mankany amin'ny fidirana an-tsehatra na fisehoana amin'ity raharaham-pirenena, ara-panahy na ara-tsaina ity dia miverina amin'ny fanjakana faharoa sy ambany. Amin'ity fanjakana faharoa ity dia hafa noho ny tamin'ny voalohany ny raharaha. Miseho mazava izao ny maha-roa tonta an'io raharaha io. Ny poti tsirairay dia toa tsy mihetsika intsony raha tsy misy fanoherana. Mihetsiketsika ny sombintsombiny tsirairay, fa miatrika fanoherana ihany. Ny sombintsombiny tsirairay amin'ny maha-izy azy dia mitovy amin'ilay mihetsiketsika sy izay mihetsika, ary na dia roa aza ny natiora, ireo lafiny roa ireo dia tafakambana ho iray. Ny tsirairay dia samy manome tanjona ny iray hafa. Ny zavatra dia azo antsoina hoe ara-panahy ankehitriny, ary ny toe-piainana misy ilay fanahy-fanahy dia azo antsoina hoe toetoetran'ny fanahy-fanahy. Ny sombintsombiny tsirairay amin'ity fanjakana ity na dia antsoina aza hoe fanahy-ara-panahy dia anjakan'ny tenany manokana, izay fanahy, ary ny fanahy ao amin'ny sombintsombin'ny zava-panahy dia manjaka ny tapany hafa na ny natiora misy azy izay misy fotony. Amin'ny toe-piainan'ny fanahy-fanahy, ny fanahy dia mbola mpiorina mialoha. Rehefa mitohy amin'ny fisehoana na ny fidirana an-tsehatra ireo sombin-javatra ara-panahy dia mihamatanjaka sy mihabe ary miadana kokoa ny fihetsik'izy ireo mandra-pahatongany any amin'ny endrika endrika. Amin'ny endriny endrika, ny sombintsombiny izay maimaim-poana, mampihetsi-tena ary miasa tsy tapaka dia tsy mihontsina intsony ankehitriny. Ity fihemorana ity dia satria ny toetoetran'ny sombin-javatra dia manjaka amin'ny toetsain'ny fanahin'ilay sombin-javatra ary satria mifangaro miaraka amin'ny sombin-javatra ny zana-kazo ary mandritra ny fotoana rehetra, ny natiora ireo zana-kazo ireo dia mifehy ny toetran'ny fanahin'izy ireo. Rehefa mifampitohy ny sombintsombiny ary atambatra amin'ny sombin-javatra, miha mihalehibe sy mihamatanjaka, dia tonga teo amin'ny sisin-tany misy ny tontolon'ny nofo izy ireo ary eo am-pelatanan'ny siansa izany. Rehefa hitan'ny mpahay simia ny toetrany na ny fomba fiasa ao aminy, dia nomeny anarana hoe singa izy ireo; ary noho izany dia mahazo ireo singa isika, izay rehetra misy dikany. Ny singa tsirairay mitambatra amin'ny hafa eo ambanin'ny lalàna sasantsasany, mifangaro, mikatso ary voaravaka vato na afovoany ho toy ny raharaha matevina manodidina antsika.
Misy ny vatana, zavaboary, zavamananaina ary zavona ara-panahy. Ny firafitry ny olombelona ara-batana dia sela; singa mandrafitra; Ny zavamananaina dia atomika; fanahy ara-panahy dia fanahy. Ny mpahay simia dia mety mandinika ny fizika sy ny fanandramana amin'ny resaka molekiola, fa mbola tsy niditra tao amin'ny fanjakan'ny zava-panahy afa-tsy amin'ny hypotesa. Tsy afaka mahita na mahatsapa fiainana iray na zavaboary ara-panahy ny olombelona. Ny olona mahita na mahatsapa izay azony azony. Ny zavatra ara-batana dia mifandray amin'ny fahatsapana. Ireo singa ireo dia avy amin'ny fahatsapana mifanaraka aminy. Mba hahitana ny lohahevitra ara-panahy na zavaboary ara-panahy dia tsy maintsy afa-mihetsika an-kalalahana irery ny saina tsy misy ao an-tsaina. Rehefa afaka mihetsika an-kalalahana ny saina tsy mampiasa ny sainy dia hahita fa zava-panahy sy zavamananaina. Rehefa mahatsapa tsara ny saina amin'izay dia ho afaka mahalala zavaboary ara-panahy. Saingy ny zavaboary ara-panahy na ny zavamananaina fantatra amin'izany dia tsy ary tsy afaka ireny zavaboary ireny izay tsy misy vatana ara-batana, izay tsy mitandrina ary tsy manao tsinontsinona antsoina hoe fanahy na zavaboary ara-panahy, ary maniry mafy ny nofo. Miara-miasa amin'ny olombelona ny fanahy rehefa ampitain'ny saina ny toe-panahy. Izany no ataony amin'ny fisainany. Ny olombelona no manana ny maha izy azy ara-panahy. Amin'ny lafiny ara-tsaina dia fisaintsainana no izy. Amin'izay ny faniriany dia biby izy. Fantatsika azy ho nofo ara-batana Izy, izay ahitantsika matetika ilay biby, matetika dia mifandray amin'ny mpandinika, ary amin'ny fotoana tsy fahita firy dia hitanay ny fahitana azy amin'ny maha-ara-panahy azy.
Amin'ny maha-olona ara-panahy dia ny maha-zava-dehibe ny evolisiona, ny voalohany sy ny fanehoana farany sy vokatry ny fivoarana. Ny fanahy eo am-piandohan'ny fandraisana andraikitra na fisehoana dia tsy hita lany.
Satria ny raharaha ara-panahy voalohany dia mifandanja tsindraindray, miatrika hazakazaka, avy amin'ny fanjakana mankany amin'ny fanjakana, ary amin'ny farany, izay zavatra ara-panahy dia atao amin'ny fanandevozana sy gadraina amin'ny lafiny hafa amin'ny maha izy azy, ka ny fanahy no miandalana. amin'ny alàlan'ny dingana, avereno ny fahamboniany momba ny tenany, ary, ny fandresena ny fanoherana ny raharaha momba azy, dia farany hamerina ilay raharaha ho dingana ara-batana avy amin'ny fahatsapana ara-batana, amin'ny tontolon'ny faniriana, amin'ny dingana farany amin'ny fahatongavana farany amin'ny tontolon'ny. nieritreritra; avy amin'ity sehatra ity dia miakatra amin'ny finiavana mankany amin'ny fahatratrarana farany ary hahatratra ny tontolon'ny fanahy, ny tontolon'ny fahalalana, izay ivoahany indray ary mahalala ny tenany aorian'ny fivahinianany ela tao amin'ny tontolon'ny resaka sy ny saina.